Shanta ujeedo ee ugu mihiimsan marka aad sameesaneysid website. | Brandkii
Brandkii / Business / Shanta ujeedo ee ugu mihiimsan marka aad sameesaneysid website.
Laga yaabaa inaad is weysiideso ujeedada ama yoolka laga leeyahey in uu ganacsigaagu lahaado mareeg (website) waana muhiim inaad wax walba ood dhaqaale iyo wakhti galineysa aad u jeedo cad ka lahaato, Hadaba marka aad ganacsigaaga u sameeneysid mareeg (website) waxaa muhiim ah inaad mar walba ka fikirto (5) shan tan ujeeedo.
1- Mareegtani ma tahey Hogaan :- Wa inaad is waydiisa mareegta aad ganacsigaga u sameenayso ma yahey hogaan soo hagi kara macaamiishada, sidoo kale maku dhiiri galinaysa dadka soo boqanaya iney kula soo xidhiidhaan/xiriiran.
2- Mareegtani ma tahey waji :- Mareegta aad uu sameenayso ganacsigaaga wa in ay sawir fiican ka bixin karta ganacsigaaga lagana dheehan karaa tayada iyo wax qabadka ganacsigaaga.
3- Mareegtani ma tahey macalin :- Mareegta aad ganacsigaaga u sameenayso wa in ay bari karta dadka soo boqonaya adeegyada ganacsigaga sido kale ay dadka soo boqonayi ka heli karan xog faa’iido uleh si ay u joogteeyaan booqashada ay kusoo booqanayaan.
4- Mareegtani ma tageeri karta macamiishada :- Wa in mareegta aad u sameenayso ganacsigaagu xali karta dhibaatooyinka macamiishadu kala kulmaan adeegaga ama allabtada, Sido kale wa in mareegtu ka jawaabi kartaa dhamaan su’aalaha ay qaban macaamiishadu iyo dadka soo boqanayaba.
5- Mareegtani wax ma iibin karta :- ujeedada ugu muhiimsan ee marwalba inad ka fikirto la rabo wa inaad ogaan karta mareegta aad ganacsigaaga u samenayso wax ma iibi karta oo wax malaga dhex iibsan karaa, hadii aysan iib sameen karin micno ama faa’ido badan kuma soo kordhin karto ganacsigaga.
Hadii aad shan tan ujeedo sifiican isku waydiiso una hesho jawaabta saxda waxa kuu suurta gali karta inaad hesho mareeg ka turjunta yoolka ganacsigaga sido kale tageerta ganacsigaaga.
Hadii aad u bahaantahey mareeg tayo leh, Sawir fiicana ka bixin kara ganacsigaga, waxa aad joogtaa xarunta lagu dhiso laguna daryeelo mareegyada (website) ganacsiga. fadlan halkan nagala soo xidhiidh. HALKAN GUJI